Yaan ahay? PT. 2: hirgeliyey — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Dhawaan Waxaan akhriyey Biography ah Steve Jobs, aasaasaha iyo aragti ka dambeeya Apple, shirkadda ugu weyn caalamka. Waxay ahayd runtii xiiso leh in uu akhriyo maxaa yeelay, wuxuu ahaa hanad ah iyo qof waalan waqti isku mid ah. Noloshiisu waxay ahayd runtii xiiso tan iyo bilowgii si loo soo afjaro.
Noloshiisa oo bilaabay markii nin iyo naag la kulmay, Ilmo ka hor ay guursatay, oo waxaan siiyey kor u korsato. Tani runtii saameyn xoog isaga, maxaa yeelay, had iyo jeer uu dareemay in la dayacay, oo mar dambe waa uu ka baxay mid ka mid ah caruurta uu u gaar ah.
Laakiin qayb ka mid xiiso leh sheekada waa in nooc ka mid ah oo qoyska jecel ka California isaga qaatay. Oo iyana waxay run ahaantii ku qaaday lana daaweeyo isaga oo kale ah ay ina gaar ah. Uu aabihii ahaa injineer ah oo waxaan siiyey mahadnaq ah wax si fiican u gurato. Waalidkiisii ​​sameeyey allabaryo badan si ay isaga fursad kasta si ay u guulaystaan ​​siin.
Hadda qayb weyn ka mid ah uu guul lahaa in la sameeyo dadkii isaga la ansixiyay. Waxay isaga qaabeeya. Xitaa sida ay uu dejinayaa lo'dii kasta oo gacan ka habdhaqankiisa iyo aaminsan in uu ka dhigi kara wax dhici.
Waxa ugu qurux badan oo ku saabsan korsashada waa in dadka qaba masuul kama aha in qof go'aan in ay qaataan masuuliyadda. Waxay u arkaan ilmaha wax u bixiyaan, oo waxay isna ku bixiyaan wax kasta oo ay leeyihiin. Ilmuhu waa Miskiinka iyo ay ku heshiiyaan in ay la kulmaan baahida kuwa. Waxay ma ku waajib ah inuu u sameeyo, laakiin waxay sidaas u yeelaan baxay raxmadda.
ansaxinta Ilaah dadka aniga iyo adiga oo kale waa isku mid siyaabo badan. Ilaah ma aha inuu na anfaco. Ilaah ma aha waajib. wax ay isaga bixiyaan Waxaan leenahay. Waxaan nahay ba'an oo saboolka baahanna, oo Ilaah u yaboohay si loo daboolo baahida kuwa.
Laakiin farqiga u weyn waa in Ilaah ma aha dhaqmaadka kids random uu la kulmay. Ilaah waa dhaqmaadka mucaaradka kuwaas oo xumaadeen,. Ilaah waa dhaqmaadka dambiilayaasha. Ilaah waa dhaqmaadka dembilayaasha u qurux badan laakiin jabay. Waxaa jira carruur idinka mid ahu Ilaah maxaa yeelay, meeshaasu waa jacayl lahayn sida uu.
Bal aynu eegno John 1:10 inay ku soo bilaaban waqtigeena.
"Wuxuu ku jiray dunida, dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa, weli dunida ma aan aqoonin isaga. Wuxuu u yimid kuwiisii, iyo dadka kuwiisiina ma ay isaga u aqbal. Laakiin in alla intii isaga ka heli, kuwaas oo magiciisa rumaystay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, dhashay, aan ka dhalan dhiigga, ama doonistii jidhka, ama dad doonistiis Aadanaha, laakiin Ilaah. " (John 1:10-13)
waxaan. Wuxuu ku dhashay oo uu Family
Mid ka mid ah fikradaha ugu caansan dalka oo kale leh waa in qof walba waa ilmo Ilaah. Laakiin in aan waxa Kitaabka Quduuska ah barayaa ay. Kitaabku waxa uu barayaa in aan marka aynnu ku dhashay, ma nahay carruurta Ilaah, laakiin colka Eebe. Oo Kitaabka Quduuska ah barayaa wax ka sii cabsi, in aan ku dhashay carruurta Ibliisku. Tani macnaheedu ma aha in aan geesihii, laakiin in aan soo socda Ibliiska iyo in falalka noo eegto sida uu badan sida Ilaah.
Haddaba dad badan oo maanta dhihi lahaa in codadka doqonimo iyo dulqaad. "Dabcan waxaan tahay dhammaan carruurta Ilaah,"Waxay dhihi kara. Well, haa, waxaan oo dhan ku sameeyey Ilaah iyo in dareen in aan nahay farcankiisa, laakiin Kitaabka Quduuska ah waxaa loola jeedaa wax badan ka badan marka ay ka hadlayaa isagoo ah carruurtii Ilaah oo. Waa la mid ah farqiga u dhexeeya isagoo wiil yar ah aabaha noolaha, laakiin aan si dhab ah in ay noloshooda, marka la barbar dhigo isagoo qof aabe, iyaga jecel, iyaga la ciyaaro, iyo daryeelka baahidooda.
Waxa aan jeclahay in la dhasha qoyskaaga, oo sida caadiga ah dhacdaa si toos ah. Waxaa uu leeyahay in ay isbedel, dhalashada cusub, diinta ah. Waxaad wiil ama gabadh Ilaah ma tahay sababtoo ah waalidka yihiin, ama maxaa yeelay aad saaxiibo yihiin, ama sababtoo ah aad rabto in aad noqon.
Haddii aan u socoto si ay u noqdaan wiil ama gabadh Ilaah, waannu in la ansixiyay galay qoyskiisa. Laakiin sidee dhici?
Haddii aad naftaada ka fiirso noqon Christian a, Waxaan doonayaa in aad is weydiiso sababta. Kasta oo hadda ka dibna waxaan noqon doonaa on diyaarad, oo anna waxaan ku weydiin doonaa dadka soo socda ii in ay leeyihiin xiriir la leh Ilaah. Oo iyana waxay badanaa dhihi haa, oo anna waxaan iyaga sababta weydiin doonaa. Oo iyaga waxaan ku weydiin doonaa waxa ay ku saleeyaan in on? Ma ilaa socda gamcihiisa ah, ama ku cel-salaadda a, ama akhriska aayadda a?
Aayaddan, waxaan kaliya ka akhriso sheegay quruxsan si cad u, "Dhammaan kuwa isaga u aqbal, kuwaas oo magiciisa rumaystay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan…"Noqoshada ilmo Ilaah dhacaya marka aad hesho Ciise. Oo sidee aadan heli Ciise? By rumeeyaan magiciisa.
Sidaas daraaddeed Ilaah ka fekeri sidii deeqbixiye hodanka this oo bixiya in ay qaataan hal qof kasta aadanaha on Earth sida uu ilmaha. Oo wax keliya ayuu ku weydiinayaa waxay tahay in aad hesho wiilkiisa ku noqdo rumaysadka ee. Oo aad tahay in qoyska.
Hadda waxaan dareemi uusan kaliya ma odhan "rumeeyaan waxbariddiisa."Waxa uu sheegay in"Mu'minaadka ah in uu magaca."Waxaa jira farqi aad u weyn oo u dhexeeya rumeeyaan qof ee waxbaridda iyo isku hallaynta shakhsi ah oo dhab ah. John waxa uu sheegayaa in aad hesho Ciise waa isku halleeyaa qofka-rumeeyaan magiciisa, iyo wax walba oo uu isugu muujiyey noqon.
Sidaas saaxiibo, Waxaan rabnaa in aad ogaato in aysan ahayn mid ku filan in aad ku odhan, "Waxaan aaminsanahay in qaar ka mid ah waxbarista Ciise, Waxaan aaminsanahay waa inaynu isjeclaanno, Waxaan aaminsanahay inay tahay waxaan aadaa kaniisadda. "John leh qaata isaga macnaheedu rumeeyaan magiciisa! Habeynta isku halleeya Ciise. All of Ciise.
Dhamaadka, waxaa jira laba nooc oo dadka marka ay timaado Ciise: Kuwa ka gaaloobay isaga, maxaa yeelay, waxay jecel yihiin gudcur iyo kuwa rumeeyey ee magiciisa.
“Waxaan dunida u imid sidii Nuur, si kasta oo i rumaystaa ma laga yaabaa in gudcurka ku sii jirin.” (John 12:46)
Waa Maxay Faith True?
Mararka qaar waxaan u maleynayaa in rumaysadkiinna waxaa heshiis la xaqiiqooyin qaar ka mid ah oo ku saabsan Ciise. Waan ogahay in waxa aan u maleeyey. Laakiin rumaysadkiinna waxaa dhab isaga isku halleeya. Waxaa la og xaqiiqooyinka ku saabsan cidda uu yahay iyo wixii uu sameeyay, heshiis la xaqiiqooyinka kuwa, iyo kalsooni ku qabka iyaga-sharad noloshaada iyaga on.
Ma waxaad sharad noloshaada on this? Miyaad diyaar u ah inay ku tuuraan wax walba oo iska ah in la ogaado Masiix?
Inaad dareentid uu inoo sheegayaa in yar oo ah waxa ay ka dhigan tahay in ay noqon ilmo Ilaah, iyaga ku tilmaamay sida kuwa "ku dhashay, aan ka dhalan dhiigga, ama doonistii jidhka, ama dad doonistiis Aadanaha, laakiin Ilaah. "
Waxa uu ku yidhi haddii aan dooneynaa in ay carruurta Ilaah, waxaan ku khasbannahay in dhalatey. Taas macnaheedu sameeyey tahay cusub. Our is jir dhinto. Marka ugu horaysa ee aynu ku dhalannay Maanaan ahayn xaq u, sidaa darteed waxaan u baahanahay in la mar kale ku dhashay.
John na doonayo in la ogaado in dhalashada tani waa kala duwan marka hore ka badan. Waxa uu ku siinayaa dhowr isreebreebka si loo hubiyo in aan fahamsanahay in. "Ma aha oo dhiig ah" iswayneeya wuu na doonayo in la ogaado in tani waxba u qaban la soo jeeda dabiici ah ama isirka. "Ma aha mid jidhka raaca" iswayneeya wuu na doonayo in la ogaado ma billowda la rabitaanka galmada aadanaha. "Mana doonistii nin" iswayneeya wuu na doonayo in la ogaado in dhalashada laguma bilaabay nin. Tani dhalashada cusub waa Ilaah!
Wuxuu ku dhashay mar kale ma aha oo kaliya weedh in dad kor u yimid oo la. Waa dhab ah, kuwa aan isku halleeyey Masiix. Waxaa kale oo dhab ah in wax walba oo badala. Ahu uu idin siinayo qalbi cusub, iyo sidoo kale indhaha inuu isaga arko, iyo ruuxa idinku dhex jira. Waxaad tahay brand abuur cusub.
malo ah in aad marnaba awoodin in ay helaan ee la soo dhaafay waa dembiga noqon doonaa waa male khaldan. Waxaad tahay abuur cusub u dhalatey galay qoyska Ilaah.
Wax cusub ayaa ka dhacay. Waxaad la mid ma aha qof kasta oo kale mar dambe, si loo joojiyo isku dayaya in ay ahaanina sidooda oo kale. Waxaad ku biiray koox cusub oo gool cusub. Waxa kale oo aanu u leeyihiin in ay ogaadaan in la dhalashada cusub, ayaan waxaan la qaatay galay qoyska ka mid ah. Sidaas aad leedahay xubnaha qoyska, walaalaha ee iimaanka. iyaga jeclaada. Ku dhiiri geli. Waxaan halkaan u joognaa si ay u caawiyaan mid kale oo la raaco Ciise.
II. Daweeyey Like Wiilkiisa
Marka qoyska ka mid ah wuxuu qaadanayaa qof, waxay aadaan dhirir weyn si loo hubiyo in ilmuhu qaatay ma dareemaan aanu sida ay tahay ilmaha la ansixiyay. Iyagu ma ay rabto si ay u dareemaan kala duwan iyo sirgaxan ama aad jeceshahay ma aha. Halkii ay doonayaan inay ula dhaqmaan sida carruurta kale ay. In si la mid ah, markii Ilaah noo ansixiyeen sidii wiilashiisii ​​iyo gabdhihiisii, isagu wuu ina daaweysey wiilkiisii ​​keliyaha sida, Ciise.
Weligaa ma maqlay qof kala hadasho ilmahaaga fund trust a? Tani waa qof aan waalidkood hodanka, oo kaliya by xaqiiqada ah in ay ku dhasheen, waxay hadda hodan aad u. Sidaas daraaddeed baa dadkii ka caraysan sida iyaga, sababtoo ah qof kasta oo kale ayaa si adag u shaqeeyaan waayo, waxyaalaha ay leeyihiin. Waxaa laga yaabaa in ay ku raaxaystaan ​​gurigooda oo waan qalbiqaboojin ay, laakiin waxay lahaayeen in ay ka shaqeeyaan noloshooda oo dhan. Dhinaca kale, this kid hodan marnaba in ay ka shaqeeyaan maalin in uu nafta lahaa laakiin uu samaynayo ka fiican yahay qof kasta oo kale. Wuxuu leeyahay oo dhan faa'iidooyinka aan sameeyo wax ka mid ah shaqada.
ruuxa hadlaya, waxaan nahay carruurta fund trust. Just ay dabiicadda xaqiiqada ah in aan la dhalatey galay qoyska Ilaah, waxaan ka heli maal ruuxiga ah. Waxaan ku noolaa lid ku ah inuu sharciga, oo waxaan isaga u caasiyey, laakiin marka aan ku riday Rumaysad noo ayaynu Masiix ugu hesho gargaarka oo dhan Ciise heshay. Wax walba shaqada Ciise dhammaado waxaa loo wareejiyey noo.
Aynu ka hadlaan dhowr ka mid ah waxyaalihii.
"Waayo, aawadiis Wuxuuna ka dhigay inuu dembi aan dembi aqoonin ka noqon, si isaga, inaynu noqonno xaqnimada Ilaah. " (2 Corinthians 5:21)
Ciise wareegay meelo nala. Waxa uu daaweeyaa nala mid ah, oo aan la daaweeyo isaga oo kale ah. Ma aha in la yaab leh? Marka aad ansixiyay Ilaah, aad aragtay sida kuwa xaqa ahu-aan in sida wasakh ah, dembile buray, laakiin sida kuwa xaqa ah.
Waa sida qof u wareegeen natiijada imtixaanka. Waxaan aad u hesho A + xataa in kastoo aannu ku guuldareysatay, iyo Ciise xanuunka ciqaabta ku guuldareysteen.
mararka qaar waan ogahay markaan aan ku Word jidka waxaan ka mid noqon, ama marka aniga la iima kale la wadaago Injiilka sida waxaan ka mid noqon, Aan bilaabo dareem in sida Ilaah oo waalan ii tahay. Markaas waxaa ii hayaa ka tukanayay, sababtoo ah waxaan dareemayaa inuusan dooneynin inay maqlaan iga. Oo waayahaas oo waxaa fiican in la xusuusto in markii uu iga qaatay, ayuu ii siiyey xaqnimada Ciise.
Sidaas ma uu waalan ii at mar dambe; uu ku farxay oo ila jooga Masiix. My dembi walbahaarinayaa isaga, laakiin rigoore uu qoyska doorsoomaynin. Anigu ma aan samayn waxa ay qaadataa oo ay halkaas ka heli, oo waxaa jira waxba ma aan samayn karo in i saari doonaa. Waxaan kaliya u baahan tahay in ay sii aaminaad iyo isqoomameeyey.
Tani waxay sidoo kale ii siidaysay ka addoonsiga ee isku dayaya in ay dadka kale uga farxin lahaa waqtiga oo dhan. runtii waxaan halgan kula doonaya qof walba si heer sare ah ii malayn mid. Oo wax iga caawisaa ugu waa in la xasuusto in Ma u baahan tahay ogolaasho, maxaa yeelay, mar hore waxaan leeyahay Ilaah. Waxaan horey u ahay in heer wanaagsan isaga la. Waxaan leeyahay ansixinta dhan aan abid u baahan doontaa
Waa xabsi ah in ay ku noolaadaan aad nolol ku salaysan waxa ay dadka kale u malaynayso. Ilaah heer sare ah ayaa qaba, oo idinka mid ah oo ku jira Masiix, sidaa darteed ha noqon mid ku filan. Waxaad ansixinta dhan aad waligaa u baahan doontaa.
2. nolosha weligeed ah
Waxaan kasbatay dhimashada weligeed ah, laakiin ayaynu Masiix ugu hesho in ay weligood Ilaah ula noolaan. Waxaan u hesho badan nolosha-nolosha sida ay la micno ahaa in la noolaa. Waxaan u hesho in ay ku nool yihiin cibaadada kaamil ah Boqorka weligeedba.
nolosha Tani ma aha waxaan leenahay oo dhan. Maxaynu ku nool sida in? Waxaan is illowsiin wixii dhib leh weligiis iyo tartanka ka dib markii ay wax yihiin xiiso leh hadda. Laakiin sababta? Tani ma aha sida ugu fiican ee aan ka helno. Tani waa markii aan haysano dhulka si Ilaah ku ammaanaan ilaa aynu ku jirno isaga la jannada ku jira.
Marka aan u malaynayaa in ay tani tahay aan helno oo dhan inaan samayno wax kasta oo aan awoodno si uun ku raaxaystaan ​​nafteena. Laakiin marka aan ognahay in ay tani waa uun eegis Ilaaheenna mar aan qarashgareyn kartaa maalgashiga our daa'in.
3. Love aabanimo & Care
wiilkayga aan jeclahay xooray,. Oo haddana waxaan samayn lahaa wax kasta oo isaga u. Ilaah waa ina jecel yahay oo uu ina siin doonaa gabi ahaanba wax fiican noo. Sidaas daraaddeed xusuuso haddii ay jiraan wax baad hadda haysan, ma ahan maxaa yeelay, Ilaah ma awoodo inuu ku siin. Waa sababtoo ah ma kuu wanaagsan.
caddayn dheeraad ah oo xaqiiqda ah in aan ula dhaqmo inay yihiin wiilal Ilaah oo run ah waa xaqiiqada ah in aan marnaba la kala saari karaan jacaylkiisa. Waxaan la midoobay si ay Ciise, iyo Ciise naga soo bixiyey, Aabbahaan u. Sababtoo ah waxa aan ku Ciise aan marnaba la kala saari karaan Ilaah.
Su'aal: Sidaas daraaddeed kii carruurta Ilaah isaga ka kala karaa? Jawaab: mid ka mid No carruurta Ilaah ka jacaylkiisa kala karaa.
"Waayo, waxaan hubaa inaan dhimashada, ama nolosha, ama malaa'igaha, mana taliyayaashii, ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha iman doona, ama kuwa xoogga leh, height ama hoos midna, ama wax kale oo uunka oo dhan;, inaga sooci karin jacaylka Ilaah oo ku jira Rabbigeenna Ciise Masiix wuxuu noqon doonaa. " (Romans 8:38-39)
Ma jiraan wax oo dhan mid Khalqiga in naga jacaylka Ilaah oo ku jira Masiix kala karaa waa. Waxaan nahay wiilashiisii ​​iyo gabdhihiisii.
Marka aad ahaayeen kid ah, Ma waxay ahayd inaad mar uun qof aad wax sii, ka dibna isku day in aad dib u qaado? My walaashay loo isticmaalaa in this ha igu sameeyo. Waxay leeyihiin lahaa wax, iyadu ma ay run ahaantii jeclahay, ka dibna waxay ku siin lahaa ii. Waxay ahayd qashinka iyada ku. Sidaas daraaddeed waxaan u heli lahaa, magacayga ku dul qoro, waxa-u raaxaysan anaa leh. Well hadda in aan u leeyihiin baan u jeclahay inaan ku riyaaqayaa, iyo Haddaba iyadu waxay eegaysaa i riyaaqayaa iyo waxa ayay dib u doonayo. Huh? Well halka ka hor ma aanan haysan wax lifaaqa gaar ah in ay, hadda waxaan ku samayn. Waa taydii. Oo aan magacayga dadka ku dul qoray iyo baxay tirada siyaabo xiiso leh in la ciyaaro. Waa la mid ah, isagoo Ilaah la. Hadda oo aan uu tahay, wuxuu noo sheegtay in. Waxa uu sheegay in, "Mine!"Ma jiro qof naga dhufsan karo isaga iyo jacayl ka.
Waa inaan taas ku xasuusan karto marka aan soo maraan waqtiyo adag. None of jeer aannu adag inaga sooci karin jacaylka Ilaah. Dhab ahaantii, mararka qaarkood jeer kuwa adag yihiin cadaymo ah xaqiiqada ah in aan nahay carruurta Ilaah.
Eebana ma kaliya na siin walax, laakiin waxa uu ina siinayaa qudhiisu. Markii aan isaga tago socda ka dib markii fulinta galmada, waxaan ka tagay wax dhabta ah in search of been abuur ah. Waxaad la kulmi kartaa, Ilaah iyo maalin kasta isaga ka maqal oo eraygiisa. Wuxuu maqli doonaa in baryadiinna haddaba u jawaab oo. Haddii aad soo dhowaan buu u soo jiidi doonaa meel u dhow si aad u.
III. Waafaqsan Wiilkiisa
Wuxuu inama ka tago halka aan joogno. Waxa uu na ka dhigaysa in ka badan isaga oo kale. Sidaas ma aha oo kaliya uu noo daweeyo sida Ciise, laakiin waxa uu naga dhigaa sida Ciise.
Waxaan la hadlay oo ku saabsan la sameeyay ekaanshaha Ilaah iyo ka jabay. Well Ciise waa image ugu fiican Ilaah, iyo Ilaah naga Xogtani uu image u gaar ah oo ay na samaynta sida Ciise. Waxaan bilaabi si loo eego sida aynu ku jirno ee qoyska.
Waxaan la hadlay oo ku saabsan nooca rumaysadka ay diyaar u inuu ka tago oo dhan iyo sharad wax walba oo ku saabsan Ciise. Marka Ilaah na wuxuu qaadanayaa, uusan naga tegin halka aan joogno.
Waxaan la hadlayay ardayda qaar ka mid ah maalinta kale oo ku saabsan Ciise rumaysatay, iyo hal qof oo uu sheegay in, "Waxaan rumeysanahay, laakiin weli waxaan doonayaa inaan ku baashaalo mararka qaarkood. Taasi waa sababta aanan samayn had iyo jeer sida iyagoo ku wareegsan dadka Masiixiyiinta ah. "Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah wax in qofka aaminsan in, laakiin nooca iimaanka Kitaabka Quduuska ah waxaa ku baaqaya waa dhan oo idinka mid ah. Waxaa beddelo qaabka aad u eegto aad dembi. Waxaad ka soo leexdo.
Dhegayso waxa Paul ayaa sheegay in:
"Miyaadan ogayn in kuwa xaqa darani ayan dhaxlayn boqortooyadii Ilaah? Yaan laydin khiyaanayn; mana kuwa sinaysta, ama kuwa sanamka caabuda, mana iyo dhillayaasha, rag midna ku dhaqma khaniisnimada, ama tuugagga, mana nacaa, ama kuwa sakhraama, ama kuwa wax caaya, mana dulma dhaxli doonaan boqortooyadii Ilaah. Oo sida ay ahaayeen qaar idinka mid ah. Laakiin aad maydhay, waxaad quduus, waxaad xaq magaca Rabbi Ciise Masiix iyo Ruuxa Ilaaheenna. " (1 Corinthians 6:9-11)
wax waa kuwa ee la soo dhaafay kacsan. Waxaan ma qeexay waxyaalihii dambe.
Maxaad samayn lahayd haddii aad ku arkay ilmo u sheegaya waalidka waxa la sameeyo? Saarre guri ku wareegsan amray waalidiinta iyada ku wareegsan? Waxaad u malayn lahaa, waxay ahayd waali! maxaad? Maxaa yeelay, iyagu waa waalidiinta, laakiin ay ku socdaan sida ilmaha. Falkiisa, murugo marka dadku ay leeyihiin awood iyo mudnaanta gaar ah laakiin diido inaad ku socotid aawadeed. Waxaa xitaa crazier for Christian ah in ay ku noolaadaan dembi. Waxaad kaloo leeyihiin amar ay dembi oo aad la siiyey mudnaan ah in ay ku socdaan xorriyadda. Waa maxay sababta aad iska indha kara in awoodda iyo in addoonsiga socdaan?
Sida Nasaarada, Ilaah ayaa durbaba ka dhigay na wada quduusan. Hadda waxaan isku dayayaan in ay nolosheena ka dhigi si ay u muujiyaan kuwa aan nahay in Masiixa maalin kasta. Haddii aad ku sugan tahay Masiixa oo aan kuwa Beenaalayaasha ah. Adiguna ma waxaad tahay khaniis ah. Adiguna ma waxaad tahay tuug. Waxaad tahay kiisii ​​a. alaabtii Taasi leeyahay awood ahna idinkuma lahayn oon mar dambe.
Anigu garan maayo waxa ay dadka la halgamayno in halkan maanta, laakiin waxaa muhiim ah in la fahmo in isbedelka xaaladda uu ku dhacay, haddii aad tahay qof ku jira Masiix. Waxaan xusuustaa xilli in aan nolosha Christian markii aan qabto wareeg aad u xun ee dembiga. Oo haddana waxaan dareemay in sida aan ahaa oo ayan dembigayga. Oo meel weyn oo aan koritaanka waxaa qabanaya runta this: in aanan haysan dembaajiyey. Waxaan la xoreeyay addoonsiga ee la soo dhaafay
Wixii Ilaah Daryeelada Most About
Waxa ugu weyn ee Ilaah ku yahay in aad noloshaada sameynayo aad quduuska. In ka badan uu ka walaacsan gargaarkiinna, uu ka walaacsan aad quduusnimada. In Cibraaniyada 12, qoraaga waxa uu ka hadlayaa anshaxa nolosheena. Mararka qaarkood nolosha yeeli doonaan. Laakiin waa iska cadahay in marka aan soo maraan waqtiyo adag, taas micnaheedu ma aha, Eebana ma nagu jecel. Dhab ahaantii isagu wuu ina jecel yahay by na siinaya jeer adag. anshaxa Ereygan in uu asal ahaan loo isticmaalo waxaa loola jeedaa tababarka. Ilaah waa noo tababar oo na samaynta dheeraad ah sida Ciise. Wuxuu waxa uu naga dhigayaa quduuska ah.
Waxa ay noqon doontaa unloving Ilaah ha naga tababar oo na more quduuska ah ka dhigi. Waxay ka dhigan tahay in aynaan tahay wiilashiisa. Mararka qaarkood wuxuu u gana edbin inaannu jidkayaga dembiga aawadiis. Marka aad dembaabin, oo waxaa jira cawaaqib xun, ha u qaadan in beegay sida kaliya. Waa in aad ka fiirsan in Ilaah idin edbiyo. Waxa uu aad muujinaya waxa dembi keentaa, oo uu qaabaynta inaad aad samayn dheeraad ah sida Masiix. Waa sida aan waa weyd, iyo tijaabooyin aynu buff. Ciise waa buffness ruuxiga kaamil ah, oo Ilaah doonayo in uu inaga dhigo, isaga oo kale.
Ugu dambayntii ay tani tahay shaqada Ilaah. Wuxuu sameeyaa iyada oo dadaalkeena, laakiin haddii aad tahay in Masiixa aawadiis ayuu oo saas samayn doona karo. Sidaas daraaddeed ha iska dhigin mid aad naftaada niyad. laga yaabaa inaad dareentid sida aad naftaada ma beddeli karaan, iyo in run. Tag meelaha Wuxuu u Yaboohay Eebe wuxuu idiin bedeli doono.
Haddii aad tahay qof Christian ah, waxaa muhiim ah in la ogaado qofka aad tahay iyo waxa ballan qaadyada Ilaah waa idiin. Waxaad la soo korsaday. Waxaad tahay wiil ama gabadh Ilaah.
Wiilkaygiiyow helo wax badan oo ka mid ah faa'iidooyinka ka wiilkayga. Waxaan is ogow isaga, siiyaan isaga for, iyo in la hubiyo ayuu quudiyey. Kuwa isku mudnaanta aan u bixiyeen uun ilmo kasta agagaarka. Laakiin in micnaheedu ma aha in aad aan la ansixiyay kartaa.
Injiilka waa fariinta ugu gaar ah oo loo dhan yahay ee dunida. Barakada Kuwani kaliya tagaan si ay qaar ka mid ah, laakiin waxaa laga heli karaa dhammaan. Trust in Masiix. Ilaah waa idin anfaco. Wuxuu idin siin doonaa waxyaalaha aad marna kasbadeen-ugu horrayn waxa weeyi xidhiidh isaga la.
SU'AALO FALAQAYN AH
1. Waa maxay farqiga u sameeyaan haddii aan carruurta Ilaah tahay?
2. Waa maxay noocyada kala duwan ee kala duwan dadka igu wareegsanaa aragto waa haddii aan ahay in qoyska Ilaah?
3. Maxay yihiin aad ugu mahadcelinayaa ku saabsan isagoo wiil yar ah Ilaah?
4. Sidee xaqiiqda ah in aad la sii daayay dembi ka bedesho sida aad u dagaalamaan?
5. Waa maxay doorka uusan erayga Ilaah ciyaaro noqonayaan sida Ciise?
6. Maxaad sameyneysaa hadii aad uma sii kordhaya sida waa inaad?